Sidee xilka ku weyn karaan Guddoomiyaha & ku xigeenada Baarlamaanka..? [Akhiso Xeer hoosaadka Baarlamaanka] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waxaa si weyn loo hadal hayaa qaabka loo marayo xil ka qaadista Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, kadib markii mooshin laga keenay la isku waafaqay in la guda galo.
Qodob kamida dalabkii Guddoomiye Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) hordhigay madaxweyne Farmaajo ayaa ku saabsanaa in cod-bixintu u dhacdo si qarsoodi ah, taasoo ku cad xeer hoosaadka Baarlamaanka, ahna qaabkii hore lagu doortay guddoonka Baarlaaanka.
HADDABA HOOS KA AKHRISO QODOBKA 9-AAD EE XEER HOOSAADKA OO CADDEYANA ARRINTAN
Xil Waayidda Guddoomiyaha Golaha iyo Labadiisa Ku-xigeen.
b) Istiqaalo qoraal ah oo uu soo gudbiyay Golaha ama mid oraah oo uu ka sii daayay warbaahinta
c) Maqnaansho cudurdaar la’aan ah oo gaaraysa 45 cisho oo isku xigta.
d) Ku xad gudub shareecada islaamka, Dastuurka Qaranka, Xeer Hoosaadka Golaha, ama shuruucda Qaranka.
e) Xil gudasho la’aan joogta ah sida:
i. Dhimirkiisa oo wax u dhiman (Waali), taasoo loo baahan yahay in uu soo cadeeyo gudi takhaatiir ah oo la aqoonsan yahay laguna kalsoon yahay
ii. Caafimaad daro joogta ah ama awood beelid uusan xilka la gudan Karin, taasoo loo baahan yahay in uu soo cadeeyo gudi takhaatiir ah oo la aqoonsan yahay, laguna kalsoon yahay
iii. Mar walba oo ay muddadu ka dhammaato
iv. Xukun Kama danabeys ah ay ku riday maxkamad awood u leh oo uu ku mutaysanaayo xabsi aan ka yarayn lix Bilood (6).
2. Moshin xil ka qaadis ee ku saabsan Xubin kasta oo ka mid ah Guddoonka Golaha, kuna salaysan asbaabaha ku xusan faqradda 1aad, xarfaheeda c,d,e (i,ii, iii,iyo iv), waxaa keeni kara xildhibaano aan tiradoodu ka yarayn seddax meelood meel (1/3) tirada guud ee Golaha. Codka xil ka qaadista wuxuu ku ansaxayaa aqlabiyad seddax meelood laba meel (2/3) ee xubnaha guud ee Golaha.
3. Soo jeedin moshin xil ka-qaadis ee ku aadan guddoomiyaha/ku-xigeenadiisa waa inuu ahaadaa mid sababeysan oo ku saleysan sharciga.
4. Moshinka xil ka-qaadista waxaa laga doodayaa loona codeynayaa (10) cisho oo maalin shaqo ah gudahood, laga bilaabo taariikhda moshinka la keeney Golaha.
Previous articleXildhibaan Daahir Jeesow oo si weyn u weerarray Wakiilka Q/Midoobay iyo Beesha Caalamka
Next articleSAWIRRRO: Mid ka mida Wadooyinkii u xirnaa Taliska Ciidamada Booliska Muqdisho oo dib loo furay